China Hot Melt Glue Sheet Shangu Toe Puff uye Counter Zvishandiso Kugadzira uye Fekitori | Wode
Kupisa Melt Glue Sheet Shangu Toe Puff uye Counter Zvishandiso
Chinyorwa: Fiber, Glue
Kurema: Zvinoenderana nehunhu, ukobvu uye saizi
Ruvara: chena uye yero
Kurongedza: ne roll kana pepa
MOQ: 1000 machira
Kushandisa: shangu dzematehwe, shangu dzevashanyi, shangu soprt, shangu dzevakadzi
1.Production Line: Tine mitsara sere yekugadzira
2.We tine zvakawanda zvakadaro zvinopisa zvekutengesa zvigadzirwa
Senge fiber insole board, insole board ine eva, TPU inopisa melt sheet, ping pong inopisa melt sheet, pepa insole board, stripe insole board, antistatic insole, shank board, nonwoven fabric, insole materials, TPU hot melt film.
Yakarongedzwa nesheet kana roll, kazhinji 25 machira pa polybag kana 50 metres pane roll.Plastic inogona kudhindwa kana zvichidikanwa.
* Iine zvivakwa zvekuchinjika, yakatsetseka nzvimbo, Iine yakanaka mweya mukati mekupedzisa kugadzirwa Kuomarara kwakasimba uye wepakati kushanduka.
* Mukunyungudika maitiro, tembiricha inoda kusvika 120-160 degree, nguva iri 12-20s,
* Unoda kugadzirisa tembiricha zvinoenderana neukobvu uye kupisa kwekushisa.
* Haudi kuisa glue pairi, yakaumbwa zvakananga, kubatana kukuru, hazvisi nyore kuputsa.
* Hazvisi nyore kuremara mushure mekunyungudika, zvinogadziriswazve.
* Inokodzera shangu dzevarume nevakadzi, shangu dzeMasoja, shangu dzekumhanya, shangu dzekukwira, shangu dzegorofu, shangu dzemitambo uye shangu dzebhizinesi, shangu dzekuchengetedza, uye mabhegi & makesi, nezvimwe.
A1: isu tiri manufactory nyanzvi insole bhodhi, kemikari jira, inopisa inyauka jira anopfuura makore gumi nemashanu, fekitori redu riine yedu R&D, ramba uchivandudza chigadzirwa
Q2: Ndingawana sei iwo masampuli?
A2: kana iwe uchida sampuli, tinogona kuita sekukumbira kwako. iwo mahara emahara, asi iwe unofanirwa kubhadhara yekutakura mitoro iyo inogona kudzoserwa kwauri iwe mushure mekuisa odha.
Q3: Yakawanda sei yekutakura mitoro yemasampuli?
A3: Iko kutakura kunoenderana nehuremu hwese uye kurongedza size uye nharaunda yako.
Q4: Ndingave kwenguva yakareba sei ini ndinotarisira kuwana iwo masampuli?
A4: Iyo sampuli ichave yakagadzirira kuendeswa mumazuva matatu, iwo masampuli anozotumirwa kuburikidza neyekutaura uye inosvika mumazuva 3-10.
Q5: Maitiro ekuisa odha newe?
A5: Imwe nzira ndeyekuti iwe unogona kuti titumire yako yekutenga madhairekisheni neemail kana Fax, ipapo tinogona kuita proforma invoice yako, wobva wabhadhara dhipoziti kwatiri, tobva taronga zvigadzirwa zvako. Imwe nzira ndeyekuti iwe unogona kuisa odha paAlibaba zvakananga, izvo zvinogona kukupa yako inishuwarenzi vimbiso, kwauri, zvakanyanya kuchengetedzeka, sezvo paine wechitatu bato Alibaba ipa yako garandi kuti uve nechokwadi chekuti iwe unogona kuwana chako chikumbiro zvigadzirwa.
Q6: Ndingamiririre zvigadzirwa zvako munyika yangu? Kana ini ndichida kumiririra zvigadzirwa zvako, ndezvipi zvaunoda?
A6: Parizvino, mune imwe Nyika isu tine mumiririri, kana iwe uchida kune mumiriri wedu munyika yako, unofanirwa kutiudza kuti iwe uri Nyika neGuta ripi, uye kuti yakawanda zvakadii yakatengwa mugore rimwe chete, izvi zvichatauriranwa mushure mekuisa yekutanga kurongeka nesu.
Pashure: jira rekupisa rinonyunguduka girazi
Zvadaro: ping pong inopisa melt sheet
Akaomeswa chigunwe Puff Uye Back Counter
Counter Uye Toe Puff Shoe Kugadzira
Yakasarudzika Toe Puff Uye Counter
Yakagadziriswazve Toe Puff Uye Back Counter
Shoe Toe Puff Uye Back Counter
Thermoplastic Shoes Toe Puff Uye Counter Chinyorwa
Toe Puf Uye Kupikisa Zvishandiso
Toe Puff Uye Kupikisa
Toe Puff Uye Counter Yezvinhu zveShangu
Toe Puff Uye Counter Zvinyorwa
Toe Puff Uye Counter Kuomesa
Toe Puff Counter Kuomesa
Velvet inopisa inonyungudutsa glue sheet
ping pong inopisa melt sheet
jira rekupisa rinonyunguduka girazi
Pepa Insole Bhodhi NaEva, Isina kurukwa Mucheka NaEva, Insole Bhodhi NaEva, Shangu Insole Chinyorwa Sheet, Tsono Punch Nonwoven Mucheka, Yakasarudzika Mucheka Laminated Na Eva Foam,